warkii.com » Dagaalkii 3aad Adduunka Oo Carabta Isku Jilbo Dhigan Karaan
DF oo Muqdisho ku xirtay Maxamuud Cumar Cadaan iyo ganacsato kale oo la xiriiray Al-Shabaab
Xildhibaankii labaad oo loo ballan-qaaday kursigiisa baarlamanka 2021 – Waa kuma?
Wararkii ugu dambeeyey dagaalka Azerbaijan iyo Armenia – Maxay damacsan yihiin Turkey iyo Russia?
Wararkii ugu dambeeyeyee dagaalka Azerbaijan iyo Armenia – Maxay damacsan yihiin Turkey iyo Russia?
Sahra Abuukar oo Soomaali ah ayaa ku guuleysatay tartanka quruxda Mareykanka
Dagaalkii 3aad Adduunka Oo Carabta Isku Jilbo Dhigan Karaan
Waxaa bilihii lasoo dhaafay isa soo tarayay xiisadda u dhaxeysa labada dal ee ugu awoodda badan bariga dhexe, Masar iyo Turkiga oo kala taageeraya dhinacyada isku haya dagaalka ka socda dalka Libya.
Dowladda Turkiga ayaa ciidamo u dirtay dalka Libya, si ay u taageeraan dowladda uu caalamka aqoonsanyahay ee fadhigeedu yahay Tripoli, halka dalal Masar ay kamid tahayna ay taageero u muujiyeen Janeraal Khaliifa Xaftar.
Madaxaweynaha dalka Masar Cabdicasiis Al-Sisi ayaa maalmo kahor ku gooddiyay inay suurtagal-tahay in dalkiisa uu qaadi doono tallaabo milatari oo lagu taageerayo janeraal Khaliifa Xaftar.
Khudbad uu telefishinka ka jeediyay ayuu madaxweyne Al- Sisi ku sheegay in magaalada Sirte ay Masar u tahay khad cas.
Ciidamada dowladda oo uu Turkiga baritaarayo ayaa ku sii siqaya magaalada Sirte iyagoo horayna ula wareegay magaalooyin muhiim u ah Xaftar.
Turkiga ayaa sheegay in haddii Xaftar uu doonayo xabad joojin waarta, marka hore laga doonayo in uu isaga baxo magaalada Sirte. Dadka darsa arrimaha Bariga Dhexe ayaa aaminsan in haddii Masar ay ka dhabeyso hanjabaada madaxweyne Sisi, ay taasi horseedeyso in dalalka Masar iyo Turkiga ay isku farasaaraan dagaalka gudaha Libya.
Haddaba labada dhanka awoodda milateri halkee kala taagan yihiin?
Awoodda milateri ee Masar,
Masar waxay kamid tahay dalalka ugu awoodda badan bariga dhexe
Dalka Masar ayaa qiimeyntii sanadkan lagu sameeyay dalalka ugu awoodda badan caalamka dhanka milateriga waxaa uu ka galay kaalinta 9-aad, halka Turkiga na uu galay kaalinta 11-aad.
Dalka Turkiga ayaa sanadkii lasoo dhaafay kaalinta sagaalaad ka galay dalalka ugu awoodda badan dunida, balse haatan waxaa muuqata in uu hoos uga dhacay.
Wargeyska The Forbes ayaa milateriga waddanka Masar ku tilmaamay kan ugu awoodda badan dalalka Bariga Dhexe, waxaana kaalinta labaad galay dalka Turkiga oo sanadkii hore wargeyska uu ku qiimeeyay in uu yahay dalka ugu awoodda badan gobolkaas.
Shacabka dalka Masar oo ku dhow boqol milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxaa uu wargeyska Global Fire Power ku qiyaasay in ay yihiin 43 milyan oo qof, halka kuwa hawgalka hore ka geli kara ay yihiin 36 milyan oo qof.
Madaxweyne Sisi oo ciidanka kormeeraya
Ciidanka milateriga ee dhulka ee u diiwaangashan Wasaaradda Gaashaandhigga ee Masar ayaa tiradoodu waxaa ay gaareysaa 920 kun oo askari, halka ciidammada hadda ka hawl gala ay tiradoodu gaareyso 440 kun oo askari. Dowladda Masar ayaa sidoo kale heysata ciidamo keyd ah oo gaaraya 480 kun, kuwaas oo haddii loo baahdo dagaal gali kara saacad walba.
Global Fire Power waxaa uu soo wariyay in Masar ay heysato 4,295 oo ah taangiyada dagaalka, 11,700 oo ah baabuur gaashaaman, 2,189 oo ah gantaallada goobta laga rido iyo 1,084 oo ah madaafiicda wax duqeeya.
Dhanka ciidammada badda ee Masar waxay shabakadda Global Fire Power ku sheegtay in agabka ay heystaan uu guud ahaan gaarayo 316.
Ciidanka badda ee Masar ayaa heysta laba markab oo ah kuwa qaada diyaaradaha, kuwaas oo ay adag tahay in la helo dal kale oo Afrikaan ah oo heysta.
Taangiyada dagaalka ee Masar
Waxaa ay xukuumadda Qaahira heysataa oo kale 2 markab oo ah kuwa dagaalka, siddeed gujis oo ah kuwa badda hoosteeda mukhuurta, 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha iyo 31 maraakiib oo ah nooca badda ku aasa miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aaso.
Milateriga Masar ayaa sanadkiiba waxaa lagu kharash gareeya lacag dhan 3 bilyan oo doolar, waxaana qeyb ahaan lacagtaas bixiya Dowladda Mareykanka.
Ciidanka cirka ee Masar ayaa heysta 215 diyaaradood oo ah nooca dagaalka, 59 diyaaradaha milateriga ee xamuulka qaada ah, 387 oo ah diyaaradaha lagu tababaro cidamada cirka, 294 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarka loo yaqaano iyo 81 oo ah helikobtarada wax weerara.
Awoodda milateri ee dalka Turkiga,
Dalka Turkiga oo ay ku nool yihiin dad gaaraya sideetan milyan oo qof ayaa dadka shaqeeya waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 42 milyan oo qof, waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradooda uu wargeyska ku sheegay 735 kun oo askari.
Ciidanka sida tooska ah u dagaal geli kara ee Turkiga ayaa jariiradda The Global Fire Power waxay ku qiyaastay 355 kun oo askari, halka ciidamada heegankana ama keydka ku jira ay gaarayaan 380 kun oo aksari.
Turkiga ayuu GFP sheegay in ay ka mid yihiin tobanka dowladood ee ugu awoodda badan caalamka, waxaana diyaaradaha ciidanka cirka ee Turkiga lagu sheegay 1,067 diyaaradood, kuwaas oo isugu jira noocyo kala duwan.
Diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Turkiga ayaa tiradoodu waxay gaareysaa 207, halka kuwa wax duqeeya ay iyaguna gaarayaan 207.
Diyaaradaha xamuulka ee milateriga Turkiga ayaa gaaraya 87 diyaaradood, halka kuwa lagu tababaro ciidamada cirkana ay gaarayaan 289 diyaaradood.
Diyaaradaha dagaalka ee Turkiga
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka ee milateriga Turkiga ayaa tiradoodu dhan tahay 792, waxaana 94 kamid ay yihiin kuwa wax duqeeya ee weerarada loo adeegsado.
Sidoo kale Turkiga ayaa dhawaan dalka Ruushka kasoo iibsaday gantaalada difaaca cirka ee loo yaqaano S-400, kuwaas oo uu farsameeyay Ruushka, si casri ahna loo farsameeyay.
Ciidanka dhulka ee milateriga Turkiga ayaa kaalinta toddobaad waxaa ay ka galeen ciidamada ugu awoodda badan ee caalamka.
Taangiyada dagaalka ee Turkiga ayaa gaaraya 3,200, halka baabuurta gaashaaman ee dagaalkana ay gaarayaan 9,500 oo baabuur.
Ciidanka Turkiga ayaa sidoo kale leh madaafiicda goobta ee loo yaqanao Artilariga oo gaaraya 1,120, 350 oo ah hubka ay Soomaalidu u taqaano BM-ka iyo noocyo kale oo ah madaafiic casri ah, kuwaas oo iskood u dagaal geli kara, tiradoodudana ay gaareyso 1,272.
Madaxweynaha Turkiga, Rajab Tayib Erdogan ayaa toddobadyo kahor daaha ka rogay gujiskii ugu horeeyay ee lagu farsameeyo gudaha wadankaas, waxaana uu sheegay in kuwa kale oo badanna ay ka shaqeynayaan sameyntooda.
Ciidanka badda ee Turkiga ayaa leh 34 marakiib oo lagu ilaaliyo xeebaha dalkaas, 12 gujis, 16 maraakiibta dagaalka iyo 11 maraakiibta kahortagga miinooyinka lagu aaso badda hoosteeda.
Ciidanka badda ee Turkiga ayaa sidoo kale leh markab loogu magac daray Peninsula of Anatolia, kaas oo ah markab xambaara diyaaradaha dagaalka.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in marka la gaaro sanadka 2022 ay si toos ah u hawlgelin doonaan gujiska lagu farsameeyay gudaha Turkiga. Gujiska ayaa awood u yeelan doona in uu hawgallo ka fuliyo meelo fogfog.
DF oo Muqdisho ku xirtay Maxamuud Cumar Cadaan iyo ganacsato kale oo la xiriiray Al-ShabaabSeptember 29, 2020
Xildhibaankii labaad oo loo ballan-qaaday kursigiisa baarlamanka 2021 – Waa kuma?September 29, 2020
Wararkii ugu dambeeyey dagaalka Azerbaijan iyo Armenia – Maxay damacsan yihiin Turkey iyo Russia?September 29, 2020
Wararkii ugu dambeeyeyee dagaalka Azerbaijan iyo Armenia – Maxay damacsan yihiin Turkey iyo Russia?September 29, 2020
Sahra Abuukar oo Soomaali ah ayaa ku guuleysatay tartanka quruxda MareykankaSeptember 29, 2020
Lafta-gareen oo shaaciyey arrin lama filaan ku noqotay xildhibaano badan + SawirroSeptember 29, 2020
Maraakiib iyo doonyo ka yimid dalalka Carabta oo ku xayiran dekedda BoosaasoSeptember 29, 2020
Sahra Abuukar oo ku guuleysatay tartanka quruxda MareykankaSeptember 29, 2020
Duulimaadyada gudaha ee garoonka Aadan Cadde oo hakad galay iyo sababtaSeptember 29, 2020
Sawirro: Lafa Gareen oo shaaciyey arrin lama filaan ku noqotay xildhibaano badanSeptember 29, 2020